Waldorf သုပ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
stovetop mac နဲ့ဒိန်ခဲတွေကနို့ကိုအငွေ့ပြန်စေတယ်
မှိုဟင်းချိုနှင့်ချဉ်သောမုန့်နှင့်အတူ scalloped အာလူး
ဒင်းဗား Omelette လုပ်နည်း
stuffing နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူကြက်သား casserole
Waldorf သုပ် စပျစ်သီး၊ ပန်းသီး၊ walnuts နှင့်စပျစ်သီးများကိုပေါင်းစပ်ထားသောဂန္နွေရာသီအသုပ်ဖြစ်သည်။ အချို့သောတစ်လျှောက် potluck သို့မဟုတ်ကင်မှာဒီ crunchy ခြမ်းသုပ်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက် ဝက်သားအသားညှပ်ပေါင်ကိုဆွဲ ပြီးပြည့်စုံသောမုန့်ညက်သည်။
ဤသည်မူလ Waldorf သုပ်စာရွက်ကိုဒါဟာစိန့်မာရိရဲ့ဆေးရုံ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်ပရဟိတဘောလုံးကိုမှာကလေးများအတွက်ဖန်တီး 1896. အတွက် Waldorf ဟိုတယ်၏ ဦး ခေါင်းစားဖိုမှူးက New York မှာဖန်တီးခဲ့ပါတယ်!
ပါတီပွဲတစ်ခုသို့ကျွန်ုပ်တို့သွားစဉ်ဤပန်းကန်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူယူဆောင်လာခြင်းကိုနှစ်ခြိုက်ကြသော်လည်းနှစ်စဉ်နေ့တိုင်းအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လတ်ဆတ်သောနေ့လည်စာစားပွဲကိုပြုလုပ်စေသည်။ ဒါဟာရှေ့ဆက်လုပ်ရိုးရှင်းခရီးသွားနှင့်မဆိုပြန့်နှံ့နှင့်အတူperfectlyုံတတ်၏။ သူ့ဟာသူ, ဆလတ်တစ်အိပ်ရာပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက် မီးဖိုဖုတ်ထားသောကြက်သားရင်သားများ , ဒီစာရွက်မည်သည့် menu ကိုမှကိုက်ညီ!
Waldorf သုပ်ကိုဘေးထွက်ဟင်းအဖြစ်အသုံးပြုရတာကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့အဓိကတီထွင်မှုတစ်ခုလုပ်နိုင်တယ်။ သင်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောဖြည့်စွက်သည် ကြက်ကြောင် ဒါမှမဟုတ် ကင်ကြက်သားရင်သား , သင်သည်လှပသောကြက်သား waldorf သုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ငါအချို့နှင့်အတူဤအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကိုချစ် အိမ်လုပ်ညစာလိပ် နွေရာသီအတွက်, ငါတို့အကြိုက်ဆုံးများထဲမှပဲ!
Waldorf သုပ်နှင့်အတူကရှေ့ဆက်အချိန်ကလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကပန်းသီးနှင့်စပျစ်သီးမှချိုမြိန်မှုကို mayonnaise ထဲသို့ထည့်သွင်းပေးပြီးသုပ်အတွက်အရသာကောင်းသောအရသာတစ်မျိုးကိုဖန်တီးပေးသည်။ ဒါက potlucks များအတွက်လုံးဝစုံလင်စေသည်, သင်မတိုင်မီအဆင်သင့်ပါပဲ!
၎င်းသည်ဆလရီ၊ စပျစ်သီး၊ ပန်းသီး၊ walnuts နှင့် mayonnaise မှပြုလုပ်ထားသောဂန္ထဝင်အသုပ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအများဆုံးမကြာခဏဆလတ်၏အိပ်ရာပေါ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။
Waldorf အသုပ်တွင်ချိုမြိန်ခြင်း၊ အရာအားလုံးအတူတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
သင့်တွင်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများရှိပါက၎င်းတို့ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ငါတို့လုပ်ရတာကြိုက်တယ် cranberry Waldorf သုပ် , ဒါပေမယ့်အခြားအကြီးအဖြည့်စွက်သံပုရာဖျော်ရည်တစ်ညှစ်, chiffonade မုန်လာဥ, အခြားသီး, pecans သို့မဟုတ်အခြားအခွံမာသီးပါဝင်သည်။
လွယ်ကူတဲ့ Waldorf အသုပ်လုပ်ခြင်းဟာ ၁.၂.၃ လောက်ရိုးရှင်းပါတယ်။ ဒီလွယ်ကူသောဘေးထွက်ပန်းကန်အောင်:
ပေါင်းစပ်, Chilling နှင့်ပျော်မွေ့
အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက် waldorf အသုပ်ကိုတစ်နာရီလောက်ကြာအောင်ဖုံးအုပ်ထားရန်မမေ့ပါနှင့်။
တကယ်တော့ Waldorf သုပ်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအများကြီးမဟုတ်ပါဘူး, ကတော်တော်လေးအများကြီးရုံ mayonnaise နှင့်သကြားတစ်နည်းနည်းပါပဲ။ အချို့ကဆား၊ ငရုတ်ကောင်းသို့မဟုတ်သံပုရာဖျော်ရည်ကိုထည့်သည်။ တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအတွက်အသုံးပြုပျားရည်နှင့်ဒိန်ချဉ်ကိုလည်းမြင်ရပါတယ်။
အသားကင်ကဘာမှမစားဘူး၊ ကြိုက်တယ် မြဝတီ အချိုသည်စုံလင်သည်။ ငါတို့ကဘာဂါ၊ ကင်ကြက်၊ ဝက်သားဆွဲ ။
Ambrosia သုပ် - ပါဝင်ပစ္စည်း ၅ ခု။
သန်းကြွယ်သူဌေး Cranberry သုပ်
ဂရိ Tortellini သုပ် - အကြိုက်ဆုံးလတ်ဆတ်!
Zucchini အသုပ် (spiralized) - အရမ်းလွယ်တယ်!
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၆ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson Waldorf အသုပ်သည်ချိုသောနွေရာသီအသုပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးစိမ်းလန်းသောစပျစ်သီး၊ စပျစ်သီး၊ ပန်းသီး၊ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢နှစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သကြား
▢½ ခွက် တရုတ်နံနံ အရက်
▢၁ ခွက် စပျစ်သီး အနီရောင်၊ အစိမ်းသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံး
▢နှစ် ပန်းသီး ပါးလွှာသောအပိုင်းပိုင်းဖြတ်
▢½ ခွက် သစ်ပင် ကုန်တယ်
▢¼ ခွက် စပျစ်သီးပျဉ် မလုပ်မနေရ
mayonnaise နဲ့သကြားတို့ကိုပေါင်းစပ်ပါ။ ဘေးဖယ်ထားပါ
သော့ချက်စာလုံးWaldorf အသုပ် သင်တန်းအရံဟင်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။